Amasiko Wenkampani Namanani - INBC Electronic Technologic Co., Ltd.
Kungani Ukusungula Ngomsindo
Ngiyabonga kumakhasimende, ukuqashelwa kubo bonke abasebenzi abazikhandlayo, abanomqondo obanzi nabazidelayo kusho i-HOUD (umusa omkhulu, isimilo).
I-NBC isho umqondo obanzi wesisebenzi, ukubekezelelana, ukufuna ukuphelela nokuzedlula, kusho ukuthi umoya awunqeni, funa okuhle kakhulu. I-NBC ivela ku-3 grapheme yokuqala yokubizwa kwe-mandarin (NaBaiChuan), okumnyama nokubomvu kophawu kusho ukuthi "ulwandle luqoqe amakhulu ama-rives ukusetha enkulu" yenkampani.
Inkampani Brand Anen, thatha igama elifushane le- "Anen"
Ukuzibophezela Komkhiqizo Wethu
Ukuphepha ukonga amandla okuthembekile nemvelo.
Okuqukethwe Komkhiqizo Wethu
Silwela ukuqondiswa kwamakhasimende, sigcizelela ukuxhumana namakhasimende, siqonde ngokujulile ukulindela kwamakhasimende futhi sihlangabezane nezidingo zabo, sithathe imithwalo yemfanelo, ukuze sithuthukise ukwaneliseka kwamakhasimende. Yenza ikhasimende liphumelele, sondela ekusebenzisaneni kwesikhathi eside futhi uwine kabili.
Ukwaneliseka kwakho akuwona umphumela, kungukuqala kwethu okusha kuphela.
Thembeka futhi ithembekile: Thembeka komunye nomunye, ukwakha isisekelo sebhizinisi. Thembeka kuwe uqobo, hlala ulungele imithwalo yemfanelo, qaphela amandla nokushoda kwakho, ukuthuthuka okuqhubekayo. Futhi masikhulume ngobuqotho ngayo yonke inhliziyo yethu, senze imizamo yethu yokuthola ukwethenjwa kwakho.
Silalela ngokucophelela izeluleko zabasebenzi, sixoxa ngenkuthalo ngenkinga yezobuchwepheshe namakhasimende bese sethula iziphakamiso zethu, ngokubambisana okuthuthukile ukuze kuthuthukiswe imvelo yezimboni, sakhe inzuzo kanye nokwabelana ngenzuzo kanye nababambe iqhaza, futhi sibhekane namathuba futhi siphonsele inselelo kanye nabo.
Thembela i-NBC, singahlangabezana nokulindela kwakho futhi njalo senze izinto zibe ngcono kancane! Ngombono oqondile, i-NBC ingaqonda futhi ibambe ukuthambekela kokuthuthuka komkhakha, ngokuya ngesidingo sekhasimende, ukuqamba okuqhubekayo, ukusetha iqembu eliqinile lobuchwepheshe, ukunikela ngemikhiqizo yokuncintisana kakhulu nesisombululo, kwenza inani lamakhasimende liqhubeke.
Ukufuna umlingani webhizinisi emhlabeni jikelele, ukusebenza okwenziwe kwasendaweni, kunikela ngezinsizakalo ezihamba phambili zamakhasimende.
Isayensi, Ukunakekelwa komuntu, udumo, ikhwalithi, ukuphendula okusheshayo, ukufuna okuhle kakhulu.
Abazithobayo, ikhwalithi enhle iwina ukwethenjwa, ukusebenziseka, ukuzuza ngokuhlanganyela, ukuzuza i-Win-Win.
Ukuhlonishwa, ubuqotho, ukuzibophezela, ukuzikhuza, ubulungiswa
Ngokuya ngezwe lomdabu, sebenza emhlabeni jikelele, ukwenza ibhizinisi elihloniphekile lamazwe omhlaba.
Gcizelela ukubaluleka kokuqondiswa kwamakhasimende, okususelwa kubazabalazi, igxathu negxathu, ngokuqhubekayo kuthuthukiswa inhlangano, inqubo, umkhiqizo kanye nempumelelo, ukwenza inkampani ibe nentuthuko ezinzile yesikhathi eside.Sebenzisa ukuphathwa okuhlukanisiwe okwabiwe imithetho yomvuzo nesijeziso; ukuhambisana ngokuphelele nomthetho, ukugcina ubulungiswa futhi ubulungiswa, Setha uhlelo oluhle lokukhuthaza, ukwenza isigaba sempumelelo somsebenzi.
Ukuze kulungiswe ushintsho oluguqukayo embonini, iNabaichuan, inkampani ihlala ivuselela izinto eziseduze nezidingo zamakhasimende nobuchwepheshe, ivula futhi ibambisane nale mboni futhi iqhubeke ngokudala inani lamakhasimende nomphakathi. INabaichuan izinikele ekucebiseni ukuxhumana kwabantu nempilo yabo nokwenza ngcono ukusebenza kwabo kahle. Ngasikhathi sinye, silwela ukuba yisinqumo sokuqala nomlingani ohamba phambili wamakhasimende ethu, futhi sibe ngumkhiqizo oyintandokazi.
Ukulalelisisa nokuqonda ngokujulile izidingo zamakhasimende; unikele ngobuqotho ngenkonzo ephelele.
Ukuqondiswa komuntu, ukuphathwa kwesayensi, ukuvelela.
Ukuphepha nezemvelo, ukuthuthukiswa okuhambisanayo, ukwaneliseka kwamakhasimende.
IHOUD (NBC) icabanga ngeHuman Resource njengenkampani eyisisekelo kanye nenjini yentuthuko. Abakwa-NBC bathole futhi bancome abantu abanethalente ngenkuthalo, bathole zonke izinhlobo zethalente lobuchwepheshe nokuphatha kule mboni, ukwakha iqembu labaphathi eliqinile kanye neqembu lobuchwepheshe lokudala.
Isimiso esiyisisekelo: nikeza amathuba kulabo abafuna ukwenza okuthile, nikeza isikhundla esifanele kulabo abangenza okuthile, klomelisa labo abenze okuthile.
1. Ukukhetha amathalente
Izinga lokukhethwa kwamathalente, ubuntu nokuzalwa yilokho okubaluleke kakhulu, isimilo esiza kuqala, bese sinakekela ukuzimisela kwabo ukusebenzela inkampani, futhi siqaphele ukuzibophezela kwabo nokufisa kwabo, bese sibheka emzamweni wabo nasekwazini ukusebenza, okokugcina kungokwabo ezinkulu kanye nemfundo.
2. Ukuqeqeshwa kwamathalente
Ukuthuthukiswa kwamakhono abasebenzi kubalulekile ekuthuthukiseni inkampani, ukuqeqeshwa kwabasebenzi kuzobaluleke kakhulu kulokhu. I-HOUD (NBC) inikeze ukuqeqeshwa kusuka olwazini oluyisisekelo kuya ekhonweni lobungcweti kubasebenzi ngokuya ngesikhundla sabo kanye nemfuneko yebhizinisi. Isisebenzi esisha sizoba ne-orientation ephelele, imodeli yokuthuthukisa amakhono isetshenziselwe ukusiza isisebenzi esisha ukuhlanganisa umsebenzi ngokushesha
3. Isicelo seThalente
Inqubomgomo yokusetshenziswa kwethalente ku-HOUD (NBC): ukuzibophezela, isifiso sokufunda, ikhono eliqinile lokusebenza, ozimisele ukuthatha imithwalo yemfanelo, oqeqeshiwe, osebenza kahle njengeqembu. Ngokuya ngokufeza, ikhono liyabaluleka ku-NBC, lapho wenze umsebenzi omuhle, ovelele, uzokhushulelwa esikhundleni esifanele sokuzithuthukisa ekusebenzeni. Ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa kwethalente kusekelwe kuzici zabo. Labo abangagcwalisa amandla akhe yithalente ngandlela thile. Sizonikeza isikhundla esifanele kwisisebenzi ngokuya ngezinga labo, amandla, isipiliyoni, isimilo, ukuqinisekisa ukuthi ithalente lomuntu lisetshenziselwa inzuzo enhle, siqinisekise ukuthi i-NBC iyaqhubeka ngokuqhubekayo, ngokushesha nangempumelelo.
4. Ukuboshwa kwamathalente
Ukuthuthuka kwebhizinisi kuvela eminikelweni yesisebenzi, ukuthuthukiswa kwebhizinisi kuzoba isikhala sokuthuthuka kwabasebenzi.
I-HOUD (NBC) igcina ukunakekelwa kokutshalwa kwabasebenzi, ingcebo nokunakekelwa ukuqinisekisa ukuthi sonke isisebenzi singasebenza ngokujabula futhi sithuthukise amandla aso ngangokunokwenzeka. Kwenziwa imisebenzi ejwayelekile yokwenza ngcono ukusebenza kweqembu, ukwenza ngcono ukuxhumana nokuxhumana, ukuthuthukisa ukuqonda nokuhlanganiswa. Ngasikhathi sinye, uhlelo lokukhuthaza lwalusethwa ku-HOUD (NBC): "ukuphathwa kwemiklomelo kanye nomklomelo wesiphakamiso sokulinganisa", "umklomelo womsebenzi ovelele", "umklomelo womsebenzi omuhle kakhulu", "umklomelo wemenenja omuhle kakhulu" kulabo ababenikele ngokuphelele emsebenzini . Futhi uhlelo lokuphepha olunzulu lwanikezwa isisebenzi, iphathi yosuku lokuzalwa yayibanjwa njalo ngenyanga kubasebenzi. Njalo ngonyaka kuzonikezwa ibhonasi ngokusebenza komsebenzi nempumelelo yakhe. Futhi uhlelo lokuphuma kwabasebenzi nokuqeqeshwa kwanikezwa ukuthuthukisa amandla nenani lomsebenzi.